Ukubonelela ngeFil Press, iServo feed, iServo Roll feeder, iSecond feeder, iCoil Press feed kunye neFayile yokuThala, iiFloil feeders, uMxhasi oZenzekelayo ovela kwiFektha yaseChina.
Inkcazo:Cinezela abaxhasi,Isibonelelo seServo,Umxhasi weServo Roll,Cinezela Okondlayo,Umxhasi weCoil, I-NC Servo Isibonelelo
Home > Imveliso > Cinezela abaxhasi
Iintlobo zeMveliso ze- Cinezela abaxhasi , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Cinezela abaxhasi , Isibonelelo seServo ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Umncedisi wePneumatic Servo feeder Qhagamshelana Ngoku
Umatshini wokuhambisa amandla weServo Roll Qhagamshelana Ngoku
UkuNikwa kweeRholo ngeNc Servo Qhagamshelana Ngoku
I-Metal Sheet servo feeder Qhagamshelana Ngoku
I-Zigzag Servo feed Umjikelo wokuGqibezela umatshini Qhagamshelana Ngoku
I-Zigzag Nc Servo feeder line Qhagamshelana Ngoku
Umatshini wokuhambisa ukutya weZigzag Servo Qhagamshelana Ngoku
Cinezela feeder yenzelwe ukondla umtya koomatshini bokushicilela okanye ukusika ukuya kumatshini wokushicilela, oomatshini bethu bokushicilela babandakanya umatshini wokuhambisa isantya esiphezulu, umatshini wokuphakisha we-NC servo, umatshini wokuphakisha weesantya esiphezulu, umatshini ohamba ngesantya esiphezulu wegiya kunye nokunye.
Ngokwesiqhelo, isantya somatshini wokutya se-NC servo sinokufikelela kwi-0-20m / min. Ukujonga ngokungcono kungcono kune- //- 0.05mm.Ukulungele zonke iintlobo zokuncamathela kweshiti.
Umatshini wokuhambisa we-servo we-NC ufanelekile ukuqina kwe-0-3.2mm yonke intsimbi yokutyisa i-coil.
High speed umatshini igripha otyisayo equiped ngesantya esiphezulu umatshini cofa yokwenza amaqhosha yesiphelo nentsimbi.
Umatshini wokuphakisha wejar yejubane eliphezulu ufumaneka ngomshini wesantya esiphezulu sokwenza izixhobo ezifana ne-EI inxenye kunye nes stator kunye nerator.
Umatshini wokushicilela kaMayflay osetyenziswa ngokubanzi kwikhompyuter, kwifowuni ephathekayo, kwimizi-mveliso yeemoto, izixhobo zombane, izixhobo zonyango nezixhobo, izixhobo zokwenza izixhobo kunye nezixhobo zecandelo lesinyithi kunye nokunye.
Cinezela abaxhasi Isibonelelo seServo Umxhasi weServo Roll Cinezela Okondlayo Umxhasi weCoil I-NC Servo Isibonelelo Cinezela Cofa Cinezela iiLayini